Mogadishu Journal » 2017 » February » 25
//February 25, 2017
Haweeney xaas u aheyd sarkaal ajnabi ah oo ka tirsan AL-shabaab oo la qabtay
Mjournal :- Ciidamada nabad sugida iyo Sirdoonka Soomaaliya ayaa soo qabtay xaaska mid kamid ah saraakiisha Ajaaniibta Al-shabaab Haweeneydan oo magaceeda la yiraahdo Leyla Cumar Baaruud waa xaaska sarkaal Ajnabi ah oo dhalashadiisu tahay Itoobiyaan kaasoo ka tirsan xoogaga...
Madaxweyne Farmaajo oo faah faahin ka bixiyay safarkii uu ku tagay dalka Sacudi Arabia
Mjournal :- Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa dalka dib ugu soo laabtay ka dib booqasho rasmi ah oo uu ku tagey dalka Boqortooyada Sucuudi Carabiya. Madaxweyne Farmaajo oo si heer sare ah...
Xubnaha aqalka sare oo gudbiyo magacaabay
Mjournal :-Xildhibaanada Aqalka Sare ayaa maanta kulan ay yeesheen waxaa ay ku ansixiyeen Guddiyo KMG ah oo ka shaqeyn doona howlaha xildhibaanada Aqalka Sare. 1-Guddiga Amniga 2-Guddiga Miisaaniyada 3-Guddiga Gudiga Shaqaaleynta Shaqaalaha Aqalka Sare 4-Guddiga Xeer hoosaadka...
Kooxo hubeysan oo caawa nabadoon ku dhaawacay magaalada Muqdisho
Mjournal :- Nabadoon Cismaan Kheyrre oo ka mid ahaa Ergadii Galmudug kusoo dooratay Xildhibaanada ayaa kooxo hubeysan waxaana ay hada ku dhaawaceen xaafada Cali Kamiin ee degmada Warta-nabada. Waxaana la sheegay Kooxihii dhaawaca ugeystay Nabadoonka ay ka baxsadeen Goobtaasi....
RA,ISULWAARAHA CUSUB EE SOOMAALIYA XASAN CALI KHEYRE
Farmaajo oo dib ugu laabtay Muqdisho
Mjournal :-Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Maxamed oo maalimihii lasoo dhaafay ku sugnaa dalka Sucuudi Carabiya ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay . Garoonka Diyaaradaha ee Magaalada Muqdisho ayaa waxaa ku soo dhaweeyay xubno ka tirsan labada gole ee dowladda...
Dagaal ka dhacay degmada Marka
Mjournal :-Wararka Ka imaanaya Magaalada Marka Ee Xarunta Gobolka Sh/Hoose ayaa Waxaa ay sheegayaan in Halkaasi uu Maanta ka socdo Dagaal aad u culus oo u dhaxeeya Laba Maleeshiyo Beeleed. Qaar ka mid ah dadka kunool Marko oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in uu dagaalku...
Howlgalo ka socda magaalada Boosaaso
Mjournal :-Wararka ka imaanaya magaalada Boosaaso ayaa sheegaya in Ciidamada Amniga Puntland ay saaka wadaan howl gallo baaritaan, kaasoo ka dambeeyay weerar bambaano oo xalay ka dhacay magaalada. Qarax bambaano ayaa xalay lagu weeraray Bangiga dhexe ee magaalada Boosaaso, iyadoo...
Diyaarado duqeyn ka geystay gobolka Jubbada hoose
Mjournal :- Diyaarado aan la aqoon dalka laga leeyahay ayaa lagu soo waramayaa inay duqeymo ka geysteen duleedka magaalada Kismaayo ee Gobolka Jubadda Hoose. Dadka deegaanka ayaa soo sheegaya inay maqlayeen dhowr duqeyn oo ka dhacday aagga deegaanka Haawinaa oo dhaca duleedka...